चर्चित साहित्यकार डा.नरेन्द्रको कोरोना संक्रमणबाट निधन – hamrosandesh.com
भारतका चर्चित साहित्यकार डा. नरेन्द्र कोहलीको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । हिन्दी भाषाका साहित्यकार कोहलीको शनिबार साँझ दिल्लीको एक अस्पतालमा निधन भएको हो ।
८१ वर्षीय कोहलीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको पचारकै क्रममा शनिबार निधन भएको हो ।
‘न भूतो न भविष्यति’, ‘अभ्युदय’, ‘संघर्ष कि ओर’, ‘युद्ध, बन्धन’, ‘अधिकार और कर्म’ उनका चर्चित कृतिहरु हुन् ।
जनता समाजबादीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले आफू र आफ्नो दललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्बदलीय बैठकमा निमन्त्रणा नगरेको बताएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले ट्वीट गर्दै मिडियाबाट सुनिएको कथित सर्बदलीय बैठकमा प्रमनिवासको मिठोमसिनो उदरस्थ गर्न पाइएला भनेर त्यत्तिकै हाम्फालेर जाने कुरा भएन भन्ने प्रतिकृया दिएका छन् ।
डा भट्टराईले जसपाको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय बालकुमरी, ल.पु.मा सोध्दा कुनै जानकारी थिएन, पछि मिडियाबाटै सुनियो-MCCबैठक बहिष्कार पो भएछ भन्दै आश्चार्य ब्यक्त गरेका छन् । चेइ नभनी कुकुर पनि कसैको घर जॉदैन भन्दै बोलाउँदै नबोलाई कुकुर पनि कसैको घरमा नजाने बताएका छन् ।
डा भट्टराईको ट्वीटः चेइ नभनी कुकुर पनि कसैको घर जॉदैन रे! मिडियाबाट सुनिएको कथित सर्बदलीय बैठकमा प्रमनिवासको मिठोमसिनो उदरस्थ गर्न पाइएला भनेर त्यत्तिकै हाम्फालेर जाने कुरा भएन। जसपाको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय बालकुमरी, ल.पु.मा सोध्दा कुनै जानकारी थिएन, पछि मिडियाबाटै सुनियो-MCCबैठक बहिष्कार पो भएछ!